Fiaraha-miombon’ antoka Fileovana Sahamadio (SPAFi)/ Feon’ny Filazantsara – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 mai 21, 2013 septembre 30, 2013 Laisser un commentaire sur Fiaraha-miombon’ antoka Fileovana Sahamadio (SPAFi)/ Feon’ny Filazantsara
Ainga vao ho fanatsaràna sy fampandrosoana ny asa Fitoriana
Misaotra an’Andriamanitra fa dia tanteraka ny fikasàna ny hanitarana ny fiaraha- miasa amin’ny Synodam- paritany hafa. Ny 26, 27, 28 Aprily 2013 teo mantsy dia tontosa soa aman- tsara ny Fampiofanana
« Fampitaovana ny olona masina« voalohany tany amin’ny Synodam-Paritany Fisakana (SPAFi). Mpiofana 35 no nandray anjara tamin’izany ary ny 9 tamin’ireo dia Katekista. Noho ity faritra ity izay tena midadasika dia marobe noho izany ireo saha vaovao tokony iasàna, koa Fiangonana miisa 13 no nandray anjara. Nanatrika feno ny fampiofanana ny raiamandreny Pastora Randrianarisoa Fanomezanjanahary (Mpitondra Fit Miadanimerina), Past Andriamampianina Solofoniaina (Mpitondra Fil Sahamadio), ary Past Randrianandrasana Daniel (Tonia Tafika Masina Maharitra SpaFi) izay sady nandray anjara tamin’ny Fampiofanana.
Zava- dehibe ho an’ireo raiamandreny Pastora sy ny mpiofana no nisian’ny fampiofanana satria efa nisy tokoa ny programa’asa Tafika Masina natsangana nefa tsy nisy fampiharana, koa ity Fampiofanana ity dia ainga vao entin’ny faritra hirosoana tanteraka amin’ny hanatsarana sy hampandrosoana ny asa Fitoriana amin’ny ireo saha vaovao.
Araka ny fangatahan’ireo raiamandreny Pastora moa dia ny Alahady 28 Aprily nandritra ny fanompoam-pivavahana no notolorana sertifika ireo mpandray anjara. Natao moa izao mba ho fanolorana azy ireo eo anatrehan’ny Fiangonana. Handeha ka hazoto hanohy sy hanatanteraka ny asa nanirahan’ny Tompo azy avy.
FLM Ambohipo Mandritry ny fampiofanana
Mivondrona, mikaon-doha Manolotra ihany koa ny tsirairay
Ireo mpandray anjara rehetra Fanolorana Sertifka
Publié parfilazantsaramada mai 21, 2013 septembre 30, 2013 Publié dansUncategorized